Pero: Mitovy Dika Ve Ny Fahalalahana Sy Ny Tsy Fanjarian-tSakafo ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2013 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Italiano, 日本語, 繁體中文, 简体中文, Español
[ Mankany amin'ny fiteny Espaniola ny rohy rehetra, raha tsy misy toro-marika .]
Anton-dresaka any ivelany sy ao anatin'ny firenena ny sakafo (gastronomy) Peroviana. Satria farany teo tsy ny hatsaràn'ny sakafo na ireo singa nenti-paharazana nanaovana izany no resahan'ny olona – fa ny lalàna nataon'ny Filoha Ollanta Humala, fantatra amin'ny hoe Lalàna ho Fampiroboroboana ny Sakafo Ara-pahasalamana ho an'ny Zazalahy, Zazavavy, ary ny Adolantsento.
Ambaran'ilay lalàna navoaka tamin'ny 17 May fa ny tanjony dia ny “fampiroboroboana sy ny fiarovana tanteraka ny zon'ny vahoaka hànana fiahiana fahasalamam-bahoaka, ny fitomboana ary ny fivelarana sahaza amin'ny alàlan'ny fianarana, amin'ny fanamafisana sy fanomezana tombony ny hetsika ara-batana, amin'ny fananganana fenitra ara-tsakafo mahasalama sy trano fisakafoanana any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa, tahaka izany ihany koa ny fanaraha-maso ireo dokam-barotra, vaovao, ary ireo fomba hafa fanao mifandraika amin'ny sakafo sy ireo zava-pisotro tsy misy alikaola ho an'ny ankizy sy ny adolantsento” .
Raha vao neken'ny Kongresy io lalàna io ny 2 May, dia nanambara i Luis Galarreta mpikambana ao amin'ny Kongresy fa mifono ” fijery tena mitsabatsabaka izay, hitako fa hanimba ny haino aman-jery sy ny loharanom-bolany.” Mandritra izay fotoana izay ihany koa no nanamafisan'ny Minisitry ny Varotra Ivelany sy ny Fizahan-tany teo aloha, Alfredo Ferrero, fa hisy ” fiantraikany amin'ny fandefasana ny lalao fiadiana ny amboara erantany 2014 atao any Brezila” ny fanjavozavoan'io lalàna io.
Sary avy amin'i Lokendra Nath Roychoudhury, lokenrc ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Nangataka ny hanafoanana ilay lalàna ny fikambanana nasionalin'ny indostria any Pero (SNI amin'ny Espaniola) ao Però satria, ny fandraràna ny fivarotana ny sakafo mifono any amin'ny sekoly dia mamporisika ny fihinanana ireo vokatra tsy ara-dalàna manimba ny fahasalaman'ny zaza mpianatra; ankoatra izay tsy manam-pahafahana ny hanome sakafo ny ankizy ny sekoly.
Amin'ny lafiny iray, ny solontena avy amin'ny Vondrona Pan-Amerikana momba ny fahasalamana (OPS amin'ny Espaniola) sy ny Fikambanana maneran-tany momba ny fahasalamana (OMS), i Fernando Leanes, dia mankasitraka ilay lalàna sady nanambara fa “( nokasainay ialàna) ny aretina misoko mangina toy ny diabeta sy ny fiakaran'ny tosidrà izay manampy amin'ny firoboroboan'ny olana ara-pahasalamana mety hahazo ireo ankizy ireo rehefa 40 na 50 taona izy ireo.”
Mitovy ny fizaràn'ny hevitra any anaty tambajotra sosialy, ary voaravaka sarinà sandwiches (mofo voasesika) matsiro sy ireo vokatra hafa lazaina fa sakafo tsy manjary ny adihevitra. Maneho hevitra izay ifampizaràn'ny maro i (@miguelm1504) ao amin'ny Twitter :
@miguelm1504: Tsy misy hankasitraka ny lalàna iray momba ny sakafo tsy manjary na ny matihanina amin'ny dokam-barotra na ny haino aman-jery .
Zarain'i Sonia Luz Carrillo, mpanoratra, ao amin'ny Facebook ny fihetseham-pony, teo am-pijerena resadresaka tamin'ny fahitalavitra momba io resaka io izy :
Ny dokan'ireo vokatra tsy dia ara-pahasalamana loatra sady manimba ny fahasalamantsika araka ny filazan'ny manam-pahaizana-nahazo fankatoavana momba ny sakafo ohatra- no harena voalohany ho an'ny orinasan-tserasera, singanina manokana ny fahitalavitra. Manazava ny fanentanana manohitra ilay lalàna sy ireo fepetra hafa izay hahatonga ny vahoaka hikaroka ny fomba hisafidianana ny sakafo ara-pahasalamana kokoa izany.
Nampitombo ny resabe ny filazan'i Juan Luis Cipriani [en], Kardinaly sady Arsevekan'i Lima, fa nisy fotoana nihinanany sakafo tsizarizary ary ninoany fa mety hankarary ny maro amin'izy ireny, fa amin'izay fotoana izay dia tsy manaiky ny fanaovana lalàna mikasika izay azo na tsy azon'ny olona hanina izy.
Nosoratan'i Robby Ralston, mpanao dokam-barotra, ao amin'ny lahatsoratra iray nifampizaràna sy iadian-kevitra be ao amin'ny tambajotra sosialy fa araka ny fijeriny dia tsy voadinika tsara io lalàna, izay ” mamela aloka maro tsy mazava miantso tsikera ” io, ary ampiany fa ” tsy azo ialàna fa mitondra mankany amin'ny sivana amin'ny dokam-barotra sy ny kolikoly io “. Farany nomarihan'i Ralston fa ny “tena manorisory ahy dia ny fameran-dry zareo ny fahalalahako manao dokam-barotra ary ambonin'izany ny fahalalahan'ireo Peroviana hijery sy hankafy ny dokam-barotra”.
Novalian'i Isabel Guerra,mpanao gazety, tao amin'ny Facebook, amin'ny fampitàna ohatra hafa nomen”i Ralston:
Tsy manameloka ny firaisana ara-nofo ifanarahana amin'ny zaza tsy ampy taona 14 ka hatramin'ny 17 taona ny lalàm-panorenana. Ankehitriny, manana lalàna izay mandrara ny fivarotana ny atao hoe “sakafo tsy manjary” amin'ireo zaza tsy ampy taona ireo isika. Amin'ny teny hafa dia : afaka mandry amin'ny zazavavy 14 taona izany ny olon-dehibe iray,saingy tsy afaka mivarotra hot dog misy mofo aminy… :S#yodigonomás ( izay no tiako ho lazaina):S
Vao mainka nidina ambanimbany kokoa ny adihevitra rehefa nobitsihin'ny mpanao gazety iray ny sarin'ireo zanaka vavin'ny Filoha Humala ary notsikerainy fa ohatra ny ngeza loatra ny iray amin'izy ireo. Niteraka tsikera be dia be io bitsika io.
Raha mbola manana 60 andro ny Ministeran'ny Fahasalamana hanambaràna ny fampiharana ny Lalàna ho Fampiroboroboana ny Sakafo Ara-Pahasalamana, dia ampoizina ny hitohizan'ireo adihevitra sy ny faneriterena avy any amin'ireo vondrona manana tombontsoa amin'io.
Navoaka ao amin'ny bilaogin'i Juan Arellano, Globalizado, ny lahatsoratra voalohany.